Kambodza, mpikatroka mpiaro tontolo iainana voaheloka fa nikasa hikarakara “fandehanana ataom-behivavy tokana” · Global Voices teny Malagasy
Toherin'ilay vondrona ny fanotofana ilay farihy voajanahary ao an-drenivohitr'i Kambodza
Voadika ny 17 Mey 2021 3:22 GMT
Sarin'ilay mpikambana ao amin'ny Mother Nature, Long Kunthea, iray amin'ireo mpikatroka nohelohina tamin'ny 5 May. Endrika goavana i Long Kunthea raha resaka fikarakaràna ny fandehanana ataom-behivavy tokana hankany amin'ny toeram-ponenan'ny praiminisitra tamin'ny Septambra 2020. Loharano; Facebook
Dimy amin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mpiaro tontolo iainana Mother Nature no voaheloka tao Kambodza tamin'ny 5 May, vesatra anenjehana azy ny “fihantsiana fikomiana hanao heloka bevava na fanohintohinana ny filaminana sôsialy.”
Nohelohina higadra 18-20 volana ry Phoun Keo Reaksmey, Thon Ratha, Long Kunthea, Chea Kunthin, ary Alejandro Gonzalez-Davidson, ary nodidiana handoa vola 4 tapitrisa riels (1.000 dolara amerikàna).
Nanatrika ny famoahana ny didy tao amin'ny fitsaràna ry Phoun Keo Reaksmey, Thon Ratha ary Long Kunthea, izay voasambotra tamin'ny Septambra 2020. Any am-piafenana kosa i Chea Kunthin, raha i Alejandro Gonzalez-Davidson, teratany espaniôla nanorina ny vondrona indray dia voarara tsy mahazo miverina any Kambodza taorian'ny nandroahana azy tamin'ny 2015.
Miantehitra amin'ny fanaovana fanentanana amin'ny media sôsialy ny Mother Nature mba hanairana momba ireo olan'ny tontolo iainana. Tamin'ny 2015, vitan'ilay vondrona ny nanakana ny fanamboarana tohodrano iray goavana tany amin'ny faritra lavitra ao amin'ny Lohasahan'i Areng, tamin'ny fanasongadinana ny fiantraikan'izany amin'ireo tantsaha sy ireo tanàna ambanivohitra. Hatramin'ny niforonany, valo amin'ireo mpikambana ao aminy no efa nosamborin’ireo manampahefana kambodziàna.
Ireo telo nosamborina tamin'ny Septambra dia nikarakara fandehanana ataom-behivavy tokana hankany amin'ny toeram-ponenan'ny praiminisitra, ho toy ny ampahany amin'ny fanentanana iray hanoherana ny drafitra fanomezana ho an'ny tsy miankina sy fakàna ny farihy Boeung Tamok, iray amin'ireo farihy sisa tavela ao Phnom Penh, renivohitr'i Kambodza.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, niteraka fifandonana henjana tao an-tanàna ireo tetikasa fanorenana toeram-ponenana ka namindràna ireo mponina teny amoron'ny farihy. Lazain'ireo mpikatroka fa ny ankamaroan'ireo tetikasa dia nomena ho an'ireo fikambanana manana fifandraisana akaiky amin'ireo manampahefana eo amin'ny fitondrana. Nampitandrina ihany koa ry zareo momba ny fiantraika mavesatra ateraky ny fanotofana an'ireo farihy voajanahary.
Nambaran'i Alejandro Gonzalez-Davidson tao amin'ny Radio Free Asia fa tsy nanosihosy lalàna na kely aza ny vondrona misy azy ireo, satria ora marobe talohan'ilay fandehanana nokasaina hatao no nanatanterahana ny fisamborana:
Nanapaka hevitra izahay fa hanao fandehanana ataom-behivavy tokana: (Long Kunthea) fandehanana amina halavirana telo kilaometatra, miakanjo fotsy manontolo, vehivavy tokana, ary vehivavy iray hafa, 19 taona no handrakitra sy handefa mivantana izany, ary avy eo i Thun Ratha, lehilahy izy izay hiditra ao anatin'ny fifanakalozana hevitra miainga avy any an-tranony, handefa izany mivantana amin'ny media sôsialy. Izany no drafitra tamin'izany. Ary ny hevitra dia hoe handeha hankany amin'ny toerana fonenan'ny praiminisitra. Ora vitsy talohan'ny fanombohan'ilay fandehanana, nosamborin-dry zareo ireo telo mpikatroka ireo ary nogiazan-dry zareo avokoa izay zavatra nananan'ilay fikambanana — cameras, solosaina finday etc.
Nandritra ny fitsaràna dia natolotra ho toy ny porofo ireo lahatsary nakarina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Mother Nature. Voalaza fa hoe nambaran‘ny filoha nitarika ny fitsarana fa “mety hiteraka hatezeram-bahoaka” ilay fanentanana nomanin'ilay vondrona. Nanamafy ihany koa ilay mpitsara fa ny fampivoarana ny eo amin'ny farihy Boeung Tamok dia afaka hanamaivana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao Phnom Penh.
Taorian'ny fanamelohana azy, re niteny mafy nanoloana ireo mpanangona vaovao teny amin'ny fitsaràna i Thon Ratha:
Tena tsy rariny izao. Manameloka olona izay tsy manao afa-tsy ny mitandrina ny natiora … tena faran'izay mazoto mihitsy ry zareo raha hitsara.
Toy izao ny fitsaràna Khmer. Azafady, lazao amin'ny vahoaka fa mbola matanjaka izahay.
Nokianin'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona ilay fanapahankevitry ny fitsarana, na avy ao anatiny na avy any ivelan'i Kambodza, izay nampifandray azy iny amina fanafihana midadasika kokoa atao amin'ny fahalalahana maneho hevitra tato anatin'ny herintaona. Naly Pilorge, talen'ilay vondrona kambodziàna mpiaro zon'olombelona LICADHO, nilaza hoe:
Nosamborina ireo tanora ireo satria niezaka niaro ny farihy lehibe indrindra eto Phnom Penh sy hitahiry azy ho an'ireo andiantaranaka ankehitriny sy hoavy. Efa ela nijaliana ireo mpiaro tontolo iainana ireo ary takianay amin'ireo manampahefana ny hamotsoran azy ireo avy any amin'ireo fonja efa mihizina, ka hahafahan-dry zareo mihaona indray amin'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina.
Taorian'ny fitsaràna, ity no bitsika nalefan'i Mary Lawlor, mpitondra teny manokana avy amin'ny Firenena Mikambana misahana ny resaka zon'olombelona:
Malahelo aho mandre hoe misy telo mpiaro zon'olombelona avy amin'ny Mother Nature ao #Cambodia nohelohina androany higadra 18 hatramin'ny 20 volana.
Tsy tokony hiteny ity aho: tsy heloka bevava ny fiarovana am-pilaminana ny tontolo iainana.
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) 5 May 2021
Notoherin'ny Iraka Maharitry ny Fanjakana ao Kambodza any amin'ny Biraon'ny Firenena Mikambana ao Zeneva, tamin'ny alàlan'ny famoahana fanambaràna an-gazety iray:
Rehefa heloka bevava dia heloka bevava ary tsy afaka ny hohamarinina satria misy zavatra hafa ambadika tiana ho tratrarina ao anatiny.
Andro vitsy talohan'ny nanambaràna ilay didy, nangatahan‘ny Mother Nature ny vahoaka mba hijery ireo lahatsary fanentanana nalefan-dry zareo ho porofon'ny tsy maha-meloka ireo mpikatroka notànana:
Jereo ilay izy dia aoka ianareo ihany no hitsara raha toa tena mpanao heloka bevava tokoa ireo mpikatroka avy amin'ny MNC [Mother Nature Cambodia] ka mendrika ny haiditra am-ponja, na raha toa heverinareo fa kambodziàna tanora tia tanindrazana fotsiny izy ireo, te-hiaro ireo otrikarena natorany eto amin'ny firenena, ary araka izany dia tokony ho afahana avy hatrany.
Miomana ny hanao fampakàrana ho fandravàna ilay didy ny Mother Nature.